Sida loo Beddelaan WTV in MP4 si fudud oo dhaqso
> Resource > Beddelaan > WTV in MP4: Sida loo Beddelaan WTV in MP4 si fudud oo dhaqso
WTV waa gaaban Windows duubay TV Show. Waa video iyo weel file maqal ah qaab, loo isticmaalaa in uu kaydiyo barnaamijyada TV in Windows Media Center diiwaanka. Files WTV waxaa la ciyaari karaan oo keliya ciyaaryahano yar ay warbaahinta sida Windows Media Center, Nero 12, iwm Waxaa ka dhowaad ma editor video taageera H.264 WTV. Haddii aad qabtid qaar ka mid ah cajalado WTV oo aad rabto inaad daawato ama ka badan iyaga ku haboon wadaagaan, si aad u MP4 badalo karaa WTV la WTV caqli in MP4 video Converter.
Qeybta 1: WTV Best in MP4 Video Converter
Qeybta 2: WTV Free in Converter MP4
Qeybta 3: WTV Online in Converter MP4
Qeybta 1: Best WTV in MP4 Video Converter for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• Beddelaan videos in qaab kasta oo (WTV ka mid ah) si ay u qaabab aad doonayso inaad sida AVI, MKV, MOV, iwm
• presets kala duwan diinta videos si toos ah u Android iyo telefoonada Apple, ama iMovie, Pro Goo Final, iyo in ka badan.
• Gubashada videos in DVD la hidi template menu wanaagsan ilaalinta iyo in la wadaago.
• Tafatir MTV videos by falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray Cinwaan iyo saamaynta, qabsado dhalaalka, iwm
Sida loo badalo WTV in MP4
Waxaan kuu sheegi doonaan sida ay u badalaan MTV in MP4 for Windows (Windows 10 ka mid ah) ee hoos ku. Sidoo kale waxaad ka heli kartaa hage kooban oo ku saabsan sida loo badalo WTV in MP4 ee Mac (Yosemite ka mid ah) halkan .
1. Load videos in WTV WTV in ay Converter MP4
Hit ah "Add Files" icon on geeska bidix ee kore ee suuqa si shuban ah WTV videos aad rabto in aad si loogu badalo. Ama si fudud u jiidi diirada videos si aad u furmo suuqa barnaamijka. Ka dib marka aad soo dhoofsadaan faylasha WTV, waxaad ka arki kartaa iyaga soo bandhigeen sida thumbnails video in shayga saxaarad bidix.
2. Dooro MP4 ama qalabka sida qaab wax soo saarka
Dhinaca midig ee suuqa kala barnaamijka, waxaa jira ah "Qaabka Output" Murayaad, halkaas oo aad riixi kartaa qaab icon in ay arbushin ilaa suuqa kala qaab wax soo saarka. Next, dooro "Qaabka" category> "Video" subcategory ka dibna dooran "MP4" format. Haddii yoolkaaga ugu dambeeya waa inuu u ciyaaro files WTV qalabka MP4 qaar ka mid ah, halkaan, aad si toos ah u dooran kartaa qalabka sida qaab wax soo saarka. App Tani waxaa ku jira ku dhowaad dhammaan aaladaha loo jecel yahay.
Fiiro Gaar ah: waxaa dheer, waxaad riixi kartaa "Settings" doorasho hoose oo ka mid ah "Qaabka Output" Murayaad si ay ula qabsadaan encoder, heerka jir, xallinta, bitrates iyo koobin kale. By default, app this dhigaya qiimaha fiicnayn aad u.
3. Edit WTV videos (optional)
Ka sokow diinta qaabab video, taas Video Converter sidoo kale aad bixisaa qaar ka mid ah hawlaha video tafatirka qabow, sida goo, dalagga, midowdo badan videos oo qarka u saaran video dhalaalka / barbardhigo / saturation, iwm (Si fudud riix "Edit" in bar menu in la furo suuqa kala tafatirka ay).
4. Ku bilow WTV in ay diinta ka MP4
Ka dib markii ay wax walba oo la sameeyo, riix "Beddelaan" button ka furmkidoona WTV in ay diinta ka MP4. Si laguugu sahlo, waxa aad u sheegi kartaa waxa maamula ee asalka ah, si aad isku mar ka qaban kartaa shaqo kale oo la jeediya lahayn.
Qeybta 2: More fursadaha: WTV Free in Converter MP4
# 1. Free Video Converter: Wondershare Free WTV in Converter MP4
Waxaa gebi ahaanba waa WTV si xor ah MP4 video Converter. Just ku qaadan inaad ku raaxaysatid WTV FREE in ay diinta ka MP4.
Pro: Free, nadiif ah oo boosaska badan software (badalo iyo edit caadi videos, iyo soo bixi YouTube videos)
1. Haddii aad rabto in aad si loogu badalo WTV in 3D ama HD videos, Converter bilaash ah ma ka dhigi kara.
2. Waxa kaliya ee aad leedahay 10 beddelaad ee 30X xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan, halka Video Converter Ultimate dheeraad ah ku samayn karin.
3. Waxa kaliya ee kuu ogolaanaysaa inaad soo bixi YouTube videos online.
Wondershare Video Converter Free Dhab ahaantii waa dhan-in-mid WTV ah in MP4 video Converter. Just download it hoose si aad ku raaxaysan waayo-aragnimo weyn diinta ka soo bixinaa.
Beddelaan mod in MP4